နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Why and What to do after JailBreak iPad 2
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:31 PM
You Know Who July 7, 2011 at 5:06 PM
သူမက အလုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ရေးခိုင်းတာနေမယ်
အားအားယားယား သူမ .. မကြိုက်တာ ဘာတွေလုပ်နေမှန်းမှမသိတာ..
Ko Boyz July 7, 2011 at 5:13 PM
သူမ တဲ့။ ဂျူးအဖတ်များတယ် ထင်တယ်။
ကိုယ်မင်းကို ဘယ်တော့မှ ဖတ်ပြီးပြီလား...။
MrDBA July 8, 2011 at 12:05 AM
စာကြွင်း ၂။ ဖတ်မရပါ။ ပုံနှင့်တကွ သက်သေပြထားပါသည်။
Ko Boyz July 8, 2011 at 1:31 AM
ပုံ ဘယ်မှာလဲ ကဒီဘီ။ မတွေ့ရပါ။
MrDBA July 8, 2011 at 9:57 AM
Ko Boyz July 8, 2011 at 3:01 PM
ကဒီဘီဖဘတွင် ကြည့်၍မရပါ ကဒီဘီ။
နိုတီဖီကေးရှင်းကို နှိပ်လိုက်သော်လည်း ဘာမှ တက်မလာပါ။
yarwanna July 11, 2011 at 6:23 PM
PDF Patcher2 ကိုသွင်းပြီးသွားရင် နောက်တခါထပ်ပြီး ထောင်ဖေါက်ခွင့်ရှိမရှိဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Ko Boyz July 12, 2011 at 2:09 AM
Yarwarna, so far I know, PDF Pacther2is able to be installed only after you do the jail breaking. The software itself is inside Cydia strore, the store which will be installed after JB.
Hope this might help clarification. :)
Ko Boyz July 12, 2011 at 2:11 AM
On second thought, u patched it nanand then u restorer it back with iOS 4.3.3, ok, in this case oyou can re-jailbreak since 4.3.3 version got exploit which nv patched before.